Soo dejisan Genymotion 3 – Vessoft
WindowsHorumarinEmulators & Mashiinka WaalidkaGenymotion
Qeybta: Emulators & Mashiinka Waalidka
Bogga rasmiga ah: Genymotion
Genymotion – software ah in ay ku daydaan nidaamka hawlgalka Android kombiyuutarka. Software wuxuu kuu ogol yahay in ay barnaamijyo codsiyada kala duwan ama ka Android oo isticmaali go’an caadiga ah ee hawlaha qalab mobile. Genymotion u saamaxaaya in ay Customize guddi navigation, beddel xal shaashadda oo dhigay tirada Processor ama xasuusta howlgal mashiinka dalwaddii. Software ka kooban clipboard wadajir ah oo modules dhisay-in in ay ku daydaan, Wi-Fi ee GPS, camera ugu weyn oo xagga hore ee qalabka.
Khayaadka oo ka mid ah habka hawlgalka Android
Taageerada telefoonada kala duwan iyo versions Android
Tiro wayn ee emulators dhisay-in
Fursadaha Wide reserved mashiinka dalwaddii
Soo dejisan Genymotion
Faallo ku saabsan Genymotion
Genymotion Xirfadaha la xiriira